Home Wararka Shalay Siyaad Bare ayaa dalka burburiyay maanta Farmaajo ayaa damacsan
Dadka Soomaaliyeed waxeey wada qirayaan in rajo jirtay inta aan la dooran Madaxweyne Farmaajo , dhamaan qabaailadana waxeey ka bogsanayeen sameenta colaada ayku reebtay burburkii dalka. waxaa jirtaa isku soo dhawaansho & is aamin dhaxmara qabaailada soomaaliyeed.
Taariikhda Soomaaliya sida ku xusan Kaligii Taliye Mohamed Siyaad Bare inuu horay isugu dayay inuu boobo rabitaanka shacabka isla markaasna qori caaradiisa ku maamulayay dalka iyadoo ugu danbeen dalka uu ka dhaxlay burbur & dagaal sokeeye.
Maanta waxaa markale dalka uu wajahayaa khilaaf oo ugu danbeen sababi doono gacan ka hadal iyo burbur soo wajaha hey’adaha Dowlada waxaana arrintaasi masuul ka ah Dowlada uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Dadka soomaliyeed waxeey wax ka barteen habdhaqanada siyaasiinta ku abtirsada beesha Mareexan kadib markii ay had & jeer dartooda dalkeena uu uwajaho kacdoono qabaail , & in talada dalka ay xoog ineey ku qaatan damcaan.
Waa nasiib daro wayn in soomaaliya ay sabab unoqoto burburkeeda hal qoys oo laga waayay tanaasul, wax wada qeybsi & in talada dalka lawada lahaado.
Bal aan idin waydiiyo Madaxweyne Farmaajo wuxuu xoog Madaxweynayaal uga dhigtay Galmudug , Koonfur Galbeed, hirshabelle & Gobolka Banaadir oo asaga magacaabo. dhamaan doorashooyinka deeganadaasi kadhacaayo wuku kalsoonan waayay wuxuuna hungureeynaa xitaa inuu Jubaland & Puntland boobo.
Wa dareen uu lahaan karo qof aan isku kalsooneen , aanan ogoleen in lala leeyahay talada dalka anan damqeynin halista ay wajihi karaan shacabka soomaaliyeed oo hada lanool qaraxyada & weerarada argagaxisad fuliyaan.
Soomaaliya maanta qoorta waxaa ugu jirtaa maasiibada ayka dhaxleen doorashadii Mohamed Abdullahi farmaajo , qiimo kasto haku kacdo wuu baxayaa kaligii taliyaha lkn suaasha iswaydiinta mudan ayaa ah cashir maka qaadan karaan shacabka soomaaliyeed qatarta markasto kasoo gaareyso hal qoys oo aan laheen aragti tanaasul, isqaadasho, & in dowlad nimada lawada leeyahay
W/Q Abdifitaax Xuseen Shiekh